I-Indomethacin Api enkulu kunazo zonke, i-Amoxicillin Trihydrate - iTecsun
SEBENZELA UKUSETSHENZISWA NGABANTU
Imithi yokwenziwa kwemithi
I-NSP Enzyme nama-enzyme amaningi
Sibeka amakhasimende ethu nekhwalithi endaweni yokuqala, sinikeza amakhasimende.
Singumkhiqizi ochwepheshe. Yiba neminyaka eyi-10 yokuthengisa nesipiliyoni sobuchwepheshe
Sisungule abenzeli emhlabeni jikelele uhlelo lozakwethu.
sisungule iqembu elihle kakhulu, elinamakhono futhi elinolwazi ngomshini.
I-TECSUN PHARMA LIMITED yinkampani ehlangene yamasheya eyasungulwa ngo-2005.
Ububanzi bebhizinisi le-TECSUN manje selibandakanya ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokumaketha kwe-API, okwenziwa ngabantu kanye nokwenziwa kwezilwane, umkhiqizo ophelile wemithi yezilwane, izithasiselo zokuphakelayo kanye ne-Amino Acid. Inkampani ingabalingani bezimboni ezimbili ze-GMP futhi ibuye isungulwe ubudlelwano obuhle nezimboni ezingaphezu kwe-50 ze-GMP, futhi igcwalisa ngokulandelana i-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ukuthuthukisa nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi.
I-laboratory eyinhloko ye-TECSUN isungulwe futhi yamiswa ngamanye amanyuvesi amathathu adumile asendaweni ngaphandle kwe-TECSUN uqobo, yi-Hebei University, i-Hebei University of Technology, i-Hebei GongShang University.
Likuphi uhla lwethu lwebhizinisi: Kuze kube manje sesisungule ama-prosy ejenti e-Algeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia nakwamanye amazwe aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia Futhi eMiddle East naseNingizimu Melika. Sinozakwethu nenani elikhulu lamakhasimende.
UVitamin C, owaziwa nangokuthi i-ascorbic acid, uyisakhi somzimba esincibilikayo esibalulekile. Abantu nabanye o ...
Izitebhisi zithola i-USFDA appr ...
I-Strides Pharma Science Limited (Strides) namuhla imemezele ukuthi ishiya phansi i-subsidia ephelele ...
Ukushoda kukavithamini B12 ...
Ukuntuleka kwe-Vitamin B12 kungenzeka uma umuntu engatholi amavithamini anele ekudleni kwakhe, i ...
Rm 1413, Bldg A, Jinyuan Commercial Plaza, No. Umgwaqo ongu-152 East Huaian, Yuhudistrict, Shijiazhuang 050031 China
Imikhiqizo Okufakiwe - Amathegi Zezıhlabane - Ibalazwe.xml - AMP Mobile